Chii chinonzi Social Media? Nei Makambani Achifanira Kuchengeta?
Pane hurukuro zhinji pamusoro pekukanganisa kana kushayikwa kwemagariro enhau pabhizinesi reB2C neB2B. Zvizhinji zvacho zvinodzikisirwa nekuda kwekuoma kwekupiwa ne analytics, asi hapana mubvunzo kuti vanhu vari kushandisa pasocial network kutsvagisa nekutsvaga masevhisi nemhinduro. Usanditenda? Shanyira Facebook izvozvi uye utarise kune vanhu vanokumbira kurudziro yemagariro. Ndinovaona anenge mazuva ese. Muchokwadi, Vatengi vane 71% mikana yekuita kutenga zvichibva pamagariro enhau.
Nekukura kwemagariro enhau mubhizinesi mumakore mashoma apfuura, mazhinji masangano eB2B ari kuona kukosha kwechokwadi kwaanogona kupa. Kunyangwe iwe ukashandisa vezvenhau kubatsira kutengesa zvigadzirwa zvakananga kana kuzvishandisa sechinhu chimwe cheyako nzira yekutungamira yechizvarwa, kutora nzira yakarongwa inobatanidza zvizere nhepfenyuro munharaunda yako yekutengesa nzira ichakupa iwe mukana wakanaka wekugadzira bhizinesi nyowani. Stephen Tamlin, Kubazi Kunze Europe
Ndeapi mana Masocial Media Strategies Unofanirwa Kuti Bhizinesi Rako riite?
Kuteerera - Kuongorora masocial media kupindura tarisiro nevatengi pamhepo inzira inoshamisa yekugadzira hukama hwakavimbika navo. Izvo hazvifanirwe kuganhurirwa kwavari kutaura zvakananga kwauri, futi. Iwe unofanirwa kunge uchiteerera chero kutaurwa kwemazita evashandi vako, ako marangi, uye ako mazita echigadzirwa. Izvi zvinokutendera iwe kuti upindure kumibvunzo ine chekuita nekutengesa, chengetedza mukurumbira wako online, uye ita chivimbo netarisiro yako nevatengi kuti ndiwe mhando yekambani iyo ine hanya uye inoteerera. 36% yevatengesi vakawana vatengi pa #Twitter
Learning - 52% yevaridzi vebhizinesi vawana vatengi vavo pa #Facebook uye 43% yevaridzi vebhizinesi vawana vatengi vavo pa #LinkedIn. Nekujoinha nharaunda idzodzo, unogona kuteerera kuvatungamiriri veindasitiri, vanotarisira vatengi, uye vatengi vako vanotaura nezve izvo zvinhu zvakakosha zviri mukati meindasitiri yako. Izvi zvinobatsira kambani yako mukugadzira marongero enguva refu-kukwikwidza mumaindasitiri iwayo.
Kuita - Kana iwe uchingotaura chete kana uchitaurwa kwazviri, kana kana paine mukana wekutengesa - urikupotsa pakupa vezvenhau neruzivo rwekuti uri kambani yakaita sei. Kuratidzira zvemukati uye kugovana chinyorwa chekufarira kune ako tarisiro uye vatengi zvinobatsira kuvaka kuvimba nechiremera navo. Kubatsira vatengi vako kuti vabudirire kunovimbisa kubudirira kwako, kwete kwavo chete!
Kukurudzira - Kukura kusvika kwako, netiweki yako, uye kusimudzira zvigadzirwa zvako nemasevhisi inofanirwa sechikamu chehurongwa hwemagariro enhau. Iwe hausi kugara uchida kuzvisimudzira, asi zvakare haufanire kunge uchibvisa iyo mikana online. Vanopfuura makumi mana muzana evatengesi vakavhara maviri kusvika mashanu madhiri nekuda kweSocial Media
Tags: 2015 yemagariro enhau bhizinesi statsbhizinesi rezvenhaukutenga zvisarudzogoogle plus yebhizinesigoogle + yebhizinesimashandiro enhau anogona kubatsira bhizinesi rakomagariro enhau anobatsira sei bhizinesilinkedin yebhizinesikutengesa kunovharavanhu vanotengesasocial media zvebhizinesipasocial media pesvedzerozvekutengesa munharaundakutengesa munharaundatwitter yebhizinesi
Dec 1, 2015 pa 12: 09 AM
Chinyorwa chinoshamisa Douglas! Aya matipi awakapa anofanirwa kuiswa kana uchishambadzira bhizinesi rako pamhepo. Kutumira hakuna kukwana. Kuteerera vateereri vako uye kuita navo kwakakosha kuitira kuti iwe ugone kuziva zvavanofarira. Kana iwe uchiziva kufarira kwavo, iwe uchave unokwanisa kuona ako akananga vatengi. Vazhinji vatengesi vane bhizinesi rakabudirira nekuda kwevatengi vavakawana kuburikidza nesocial media. Ndatenda nekuda kweichi chinyorwa chinodzidzisa!
Dec 17, 2015 pa 1: 37 AM
Zvirokwazvo uchaita zvinhu izvi. Ndiri kureva, ndanga ndichishandisa vezvenhau sechikamu chemushandirapamwe wangu wekushambadzira uye nemaitiro akakodzera acho, kusvika parizvino, anga achiitira bhizinesi zvakanyanya. Asi ini handizvikwanise saka iyi post yako inogona kundibatsira chaizvo kuti ndiite zvirinani murudzi urwu rwe zano.